बिन्दास मुड: वाइनको साथमा सुष्मा कार्की • raradiodarpan.com
बिन्दास मुड: वाइनको साथमा सुष्मा कार्की
नायिका सुष्मा कार्की नेपाली फिल्म क्षेत्रको नायिका हुन् ।
उनी फिल्मका कारण चर्चामा नआएपनि विभिन्न फन्डाका कारण संचारमाध्यममा हटकेकका रुपमा देखिन्छिन् । अहिले लकडाउनको समयमा सुष्मा के गर्दैछिन् त ? उनले सामाजिक संजाल इन्टाग्राममा लकडाउनमा आफूले बिताएको समय सार्वजनिक गरेकि छिन् ।
निकै नै बोल्ड अवतारमा देखिएकि सुष्माको हातमा वाईन छ ।गीतमा सुष्मा मस्त छिन् । कुनै बेला नेपाली चलचित्रको आइटमदेखि अभिनयमा समेत व्यस्त रहने नायिका सुष्मा कार्कीको हातमा यतिबेला खासै चलचित्र छैन ।
फिल्ममा हिट नभएपनि उनी सामाजिक संजालमा भने निकै हिट छन् । जहाँ उनले निकै हट तस्बिर र भिडियो शेयर गरिरहन्छिन् ।
सुष्मालाई काठमाण्डौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले ‘चलेछ बतास सुस्तरी’को असफलताको बिषयमा प्रश्न गरेका थिए । यो चलचित्रपछि तपाइको हातमा खासै चलचित्र छैन होइन भन्ने प्रश्नमा सुष्मा आक्रोशित भइन् । उनले भनिन्–‘चलेछ बतास सुस्तरी हिट चलचित्र हो ।
तपाइहरुलाई मेरो बारेमा किन चासो लिनु प¥यो ?’ सुष्माले आफूले जे काम गरेपनि पत्रकारलाई के को मत्तलव भन्दै प्रश्न गरिन् ? उनले प्रश्नकर्तालाई आफ्नो बारेमा अध्ययन गरेर मात्र प्रश्न सोध्न भनिन् । कार्यक्रममा नायिका कार्की र नृत्य निर्देशक गोविन्द राइले चलचित्र बनाउन निर्माताले आफ्नो होटल नै बेचेको बताएका थिए ।